Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zikaRhulumente » Ukuyila ngokutsha uKhenketho lwexesha elizayo kunye nehlabathi: uMsebenzi omtsha we-UNWTO weSimbo saseSaudi
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • LGBTQ • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • I-WTN
UNobhala Jikelele we-UNWTO wazama ukuyimisa namhlanje, kodwa iNdibano Jikelele ye-UNWTO yenza isigqibo esibalulekileyo sokuguqula itheyibhile xa kusekwa iqela elizimeleyo lokucwangcisa kwakhona uKhenketho kwikamva.
Namhlanje iNdibano Jikelele ye-UNWTO inamaqhawe amabini:
UYE UAhmed Al Khateeb, UMphathiswa wezoKhenketho kuBukumkani baseSaudi Arabia
U-HE Reyes Maroto, uMphathiswa wezoKhenketho kuBukumkani baseSpain
Izolo, iNdibano Jikelele ye-UNWTO yayineqhawe elinye - oHloniphekileyo. UGustav Segura Costa Sancho, UMphathiswa wezoKhenketho eCosta Rica.
Izolo kwakuyimpumelelo yentando yesininzi kwi-UNWTO General Assembly xa kunyulo oluyimfihlo, abathunywa abavela kumazwe angaphezu kwama-80 baqinisekisa uZurab Pololikashvili njengoNobhala Jikelele weminye iminyaka eyi-4.
Namhlanje yayiyimpumelelo enkulu ngakumbi kwidemokhrasi xa ngokuchasene nentando kaNobhala Jikelele, ikamva loKhenketho lweHlabathi kunye ne-UNWTO yafakwa kwizandla zoMsebenzi omtsha-inyathelo eliziswe phambili yi-Saudi Arabia ne-Spain.
Umboniso wokuqala wento ekumbhobho waxoxwa ngayo kwiKomishoni yeNgingqi ye-UNWTO yeAfrika eCabo Verde nge-2 kaSeptemba 2021..
Njengayizolo, idemokhrasi iphumelele kwakhona namhlanje
KwiNdibano Jikelele ye-UNWTO eqhubekayo eMadrid, isiphakamiso sokuphinda sihlengahlengise uKhenketho lwexesha elizayo, eliziswa phambili yi-Kingdoms yaseSaudi Arabia kunye neSpeyin, yavunywa namhlanje.
Iinkokeli zokhenketho zixelele eTurboNews: "Oku kukutshintsha umdlalo kwicandelo lokhenketho lwehlabathi."
UNobhala Jikelele wasichasa kakhulu esi siphakamiso, kuba sibeka ikamva lemisebenzi yokuhlengahlengisa ishishini lokuhamba kunye nokhenketho kude nedesika yakhe kunye nezandla zeNdibano Jikelele kunye neBhunga eliLawulayo, phantsi kwe-Saudi Arabia kunye nobunkokeli baseSpain.
UZurab Pololikashvili wacinga ukuba izicwangciso zakhe zanele ukulungisa ikamva lokhenketho kwaye wabongoza iNdibano Jikelele ukuba ingasivoteli isiphakamiso saseSaudi-Spanish. Akazange afune uMsebenzi woMsebenzi okhethekileyo ozimeleyo wokuYila ngokutsha uKhenketho.
Unobhala wezoKhenketho, HE Najib Balala waseKenya, uMphathiswa wezoKhenketho waseSaudi Arabia UMnu. Ahmed Al Khateeb, kunye noMphathiswa wezoKhenketho eJamaica HE Edmund Bartlett bonke babencumile kulo mfanekiso uthathwe namhlanje emva kwevoti.
Yamkelwe: UYilo ngokutsha loKhenketho ukwenzela iFuture Task Force
Abathunywa be-UNWTO bavumile, olu ibe luloyiso olukhulu kuKhenketho lweHlabathi.
Ubhubhani we-COVID-19 ubonakalise, kunanini na ngaphambili, indima ebalulekileyo yezoqoqosho nentlalontle edlalwa lukhenketho kwihlabathi liphela. Ukhenketho ngoyena nobangela woqoqosho lwehlabathi, kodwa lo bhubhani ube nefuthe elibi kwihlabathi liphela kwaye ulichaphazele ngokunzulu eli candelo libalulekileyo, wehlisa ixabiso lentlalontle elilenziwayo. Imisebenzi eyi-62 yezigidi kunye ne-US $ 4 yetriliyoni kwi-GDP ilahlekile ngo-2020. Ihlabathi kufuneka lithathe inyathelo ukunqanda oku kungenzeki kwakhona kunye nokuvuselela eli candelo libalulekileyo.
Ukuze eli candelo liphinde lihlaziyeke, lichume, kwaye likwazi ukumelana nezinto ezothusayo zehlabathi ezizayo, kufuneka inguqu, ukuzinikela notyalo-mali ukuze kuxhamle abantu kwihlabathi liphela, ngakumbi kumazwe asakhasayo. Ukubeka ngokutsha icandelo lezokhenketho ngokubonakalayo ngakumbi kwihlabathi, sifuna intsebenziswano enkulu yamazwe ngamazwe kunye nemibutho yamazwe ngamazwe exhotyisiweyo. Oku kuya kuqinisekisa indlela ehlanganisiweyo nelungelelanisiweyo eyamkela ukuthungelana nonxulumano lwendalo kunye nokhenketho.
ikhulisa igalelo lecandelo kwimpumelelo yeeNjongo zoPhuhliso oluZinzileyo zeZizwe eziManyeneyo. Ngoku lixesha lokuYila ngokutsha uKhenketho lwexesha elizayo ngotshintsho, ukuzibophelela, notyalo-mali.
Njengentshatsheli esebenzayo yokhenketho efuna ukusebenza kwihlabathi liphela nabanye oorhulumente abanomdla kunye namaqumrhu abucala, iSaudi Arabia ibonisa ukuzibophelela kwayo ekuqhubeni intsebenziswano kuwo onke amanqanaba ukuzinikela okusentliziyweni yeDiriyah Communiqué esayinwe ngexesha likaMongameli we-G20 waseSaudi Arabia ngo-2020. , enika ingqwalasela indima ebalulekileyo edlalwa yintsebenziswano phakathi kukarhulumente namashishini abucala kwicandelo lezokhenketho.
Ayiphelelanga nje ekubeni iSaudi Arabia izinikele, ikwakulungele ukubonelela ngezixhobo eziyimfuneko ukomeleza icandelo elisekelwe kwimigaqo yokuzinza kunye namathuba kubo bonke, ukusebenza kunye nangamaziko ahlukeneyo. Njengomtyali-mali omkhulu wehlabathi kukhenketho, iSaudi Arabia ithembise nge-USD 100 yezigidi ukwenza iTourism Community Initiative ngeBhanki yeHlabathi, njengento ekhuthaza ukubuyiswa kwecandelo, ngokwenza ukuba uluntu lukwazi ukusasaza izibonelelo zoqoqosho. ukhenketho.
ISaudi Arabia ibe liqabane elisebenzayo le-UNWTO, ixhasa amanyathelo abalulekileyo abandakanya i-UNWTO Academy kunye neNkqubo ye-UNWTO yeeLali eziBalaseleyo kunye nokuba likhaya le-Ofisi yeNgingqi ye-UNWTO, eyavulwa ngoMeyi ka-2021.
UBukumkani baseSaudi Arabia bubonisa i-UNWTO kunye namaLungu ayo ngesiphakamiso sokuyila ngokutsha ukhenketho lwexesha elizayo kunye, kubandakanywa nokuseka uKhenketho oluHlaziyiweyo lweFuture Task Force. Esi siphakamiso sijonge ukumanyanisa icandelo likarhulumente nelabucala, ukuxhobisa imibutho yamazwe ngamazwe, nokwandisa intsebenziswano phakathi kwabachaphazelekayo ukuze kukhuselwe imingeni yexesha elizayo. UYilo ngokutsha loKhenketho ukwenzela iFuture Task Force lukwajolise ekuvuseleleni i-UNWTO ngokuthi, phakathi kwezinye izinto,
kuqwalaselwa utshintsho kwiindlela zokusebenza ze-UNWTO zangoku, kunye/okanye ezinye iinguqulelo ze-UNWTO.
UYilo ngokutsha loKhenketho ukwenzela iFuture Task Force
UCwangciso ngokutsha loKhenketho kuMbutho wokuSebenza weXesha elizayo luza kwenziwa liLizwe eliliLungu elinye elikhethwe yiKomishoni yoMmandla nganye kunye nesitulo. Ukwakha kwiSaudi Arabia ebonakalise ukuzibophelela kuphuhliso lwecandelo, kunye nesiphakamiso sayo sokuYila ngokutsha uKhenketho lwexesha elizayo, uBukumkani baseSaudi Arabia buzinikela ukuba bube ngusihlalo woYilo ngokutsha lwezoKhenketho kwiFuture Task Force.
IsiGqibo seSpain kunye neSaudi Arabia.
INdibano yeZizwe eziManyeneyo: Isigqibo esivunyiweyo nge-2 kaDisemba 2021
Ukuqaphela ukuba uMphathiswa wezoKhenketho kuBukumkani baseSaudi Arabia, uMhlonishwa u-Ahmed Al Khateeb, uye wazisa uNobhala-Jikelele woBukumkani baseSaudi Arabia isindululo sokuHlenga ngokutsha uKhenketho kwikamva kwaye esi siphakamiso siquka ukuseka uKhenketho oluHlaziyiweyo lwezoKhenketho. Amandla oMsebenzi wekamva,
Emva kokuphonononga ulwazi olungeniswe nguNobhala-Jikelele ngesindululo,
Ukubonakalisa ukuba ilizwe lifuna inyathelo njengoko ukubaluleka kokhenketho kuye komelezwa ngubhubhani we-COVID-19 kwaye iimpembelelo ezitshabalalisayo zobhubhane zisavakala, ngakumbi kumazwe asakhasayo, apho iMithetho ye-UNWTO yenza ireferensi ekhethekileyo,
Ukukhumbula ukuba impembelelo yentlalo-ntle yokhenketho iye yanabanzi kwaye inkulu. kwaye intsebenziswano yamazwe ngamazwe ibalulekile ukomeleza icandelo,
Ukukhumbula ukuba ngokungqinelana neSiqendu 12(j) seMithetho ye-UNWTO, iNdibano yeZizwe eziManyeneyo inokuseka nayiphi na ibhodi yezobugcisa okanye yengingqi enokuthi ibe yimfuneko,
Iyakuqonda ukubaluleka kobuchule bokusebenza nawo onke amaLungu e-UNWTO angundoqo
amalinge okuYila ngokutsha uKhenketho ukwenzela iKamva kugxilwe kutshintsho, ukuzibophelela,
Uyakuqonda ukubaluleka kokuzibophelela kuYilo ngokutsha loKhenketho ukwenzela iKamva
Ukhumbula ukuba uBukumkani baseSaudi Arabia ngoku bubambe iOfisi yeNgingqi ye
I-UNWTO eRiyadh, uBukumkani baseSaudi Arabia;
Izisombululo zokuseka iqela labasebenzi ngaphakathi kwe-UNWTO ebizwa ngokuba luYilo ngokutsha
uKhenketho kwiFuture Task Force;
Izisombululo zokuyalela ukuYila ngokutsha uKhenketho ukulungiselela iFuture Task Force
ngokuhambelana nesi siphakamiso soBukumkani baseSaudi Arabia;
Ithatha isigqibo sokuba isigunyaziso soYilo ngokutsha loKhenketho kwiFuture Task Force luyakwenza oko
ukuqhubeka de kube yiseshoni yama-26 yeNdibano yeZizwe eziManyeneyo kwaye iya kuhlaziya ngokuzenzekelayo ngaphandle kokuba kugqitywe ngolunye uhlobo sisininzi saMazwe angamaLungu aPheleleyo akhoyo kwaye avotayo;
Ithatha isigqibo sokuba uKhenketho oluYilwayo ngokutsha ukulungiselela iFuture Task Force luya kuqulunqwa
iLizwe eliLungu elinye elikhethwe yiKomishoni yoMmandla nganye kunye nesitulo. ilf a
IKomishoni yeNgingqi ayichonge ilungu layo leMisebenzi yoMsebenzi ekupheleni kwekota yokuqala ka-2022, emva koko usihlalo uya kumema iLungu leLungu elisuka kuloo Mmandla.
IKhomishini yokujoyina iMibutho yoMsebenzi;
Uchonga uBukumkani baseSaudi Arabia njengosihlalo woYilo ngokutsha loKhenketho kwi
iFuture Task Force;
Igunyazisa ukuYila ngokutsha uKhenketho ukwenzela iFuture Task Force ukuba yamkele imithetho yayo
yenkqubo njengoko kufuneka;
Ibongoza uKhenketho oluYilwayo ngokutsha ukulungiselela iFuture Task Force ukuba iqalise umsebenzi wayo njenge
ngokukhawuleza kwaye kungadlulanga ukuphela kwekota yokuqala ka-2022;
Umema uKhenketho loYilo ngokutsha lweFuture Task Force ukuba lungenise iingxelo kunye
iingcebiso ngamaxesha athile kwiBhunga eliLawulayo kunye neNdibano yeZizwe eziManyeneyo,
njengoko inokubona kufanelekile.
l. Isindululo sokuYila ngokutsha uKhenketho lwexesha elizayo
Ngeleta yomhla we-25 ka-Okthobha ka-2021, uMphathiswa wezoKhenketho kuBukumkani baseSaudi Arabia, u-HE Mnu Ahmed Al Khateeb, wazisa uNobhala-Jikelele wesiphakamiso soBukumkani baseSaudi Arabia ukuba asebenze ngokubambisana namaqabane ngamazwe ukuba ahlele ngokutsha ukhenketho. ukumanya icandelo likarhulumente nelabucala, ukuxhobisa imibutho yamazwe ngamazwe kunye nokwandisa intsebenziswano phakathi kwabachaphazelekayo ukukhusela imiceli mngeni yexesha elizayo ngoluhlu lwamanyathelo, kubandakanywa ukuseka ngaphakathi kwe-UNWTO iqela elisebenzayo lokuyila ngokutsha ukhenketho ukulungiselela ikamva (“Ukuyila ngokutsha uKhenketho ukulungiselela iFuture Task Nyanza").
Ikopi yeleta iqhotyoshelwe kolu xwebhu njengeSihlomelo l.
Ngesicelo soBukumkani baseSaudi Arabia, uNobhala-Jikelele ungenisa esi sindululo ukuHlenga ngokutsha uKhenketho lwexesha elizayo kubandakanya ukuseka uKhenketho oluHlaziyiweyo lweFuture Task Force, kwisigqibo seNdibano Jikelele ye-UNWTO, ngokuhambelana neMithetho ye-38. (1) kunye nama-40 eMigaqo yeNkqubo yeNdibano yeZizwe eziManyeneyo.
II. Imfuneko Yesenzo
Ukhenketho ngoyena mqhubi uphambili kuqoqosho lwehlabathi, kodwa ubhubhani we-COVID-19 ube nefuthe elibi kwihlabathi liphela kwaye ulichaphazele ngokugqithisileyo eli candelo libalulekileyo, linciphisa ixabiso lentlalo-qoqosho eliyidalayo. Imisebenzi eyi-62 yezigidi, kunye ne-USD 4 yetriliyoni kwi-GDP yonyaka ilahlekile ngo-2020. Onke amazwe ahluphekile. Kodwa le mpembelelo yehle ngokungathandekiyo kumazwe asakhasayo.
Ubukumkani baseSaudi Arabia buyaqonda ukuba umgaqo-nkqubo wangoku wehlabathi awubonakalisi ukubaluleka kwecandelo lezokhenketho kwaye lixesha lokuba oku kutshintshe. Ukhenketho ngoyena nobangela woqoqosho lwehlabathi. Phambi kokuba ubhubhane ubethe, i-10.4% ye-GDP yelizwe jikelele yenziwa luhambo kunye nokhenketho kwaye umsebenzi om-1 kwaba-4 wadalwa licandelo lezokhenketho.
Lo bhubhani ube nefuthe elibi kwihlabathi jikelele kwaye ulichaphazele ngokunzulu eli candelo libalulekileyo, wehlisa ixabiso lentlalo-ntle olidalayo.
Ukuze eli candelo lihlaziyeke, lichume kwaye likwazi ukumelana nezinto ezothusayo zehlabathi ezizayo, lifuna utshintsho, ukuzinikela notyalo-mali ukuze kuxhamle abantu kwihlabathi liphela, ngakumbi kumazwe asakhasayo. Ukubeka ngokutsha icandelo lezokhenketho ngokubonakalayo ngakumbi kwihlabathi, sifuna intsebenziswano enkulu yamazwe ngamazwe kunye nemibutho yamazwe ngamazwe exhotyisiweyo.
Oku kuya kuqinisekisa indlela ehlangeneyo nelungelelanisiweyo eyamkela ubume obunxibeleleneyo nonxulumano lokhenketho kwaye ikhulise igalelo lecandelo kwiiNjongo zoPhuhliso oluZinzileyo zeZizwe eziManyeneyo.
III. Ugunyaziso loYilo ngokutsha loKhenketho ukulungiselela iFuture Task Force
Ukuze kulungiswe oku kungasentla, uBukumkani baseSaudi Arabia bucebisa ukuba i-UNWTO iseke i-Redesigning Tourism for the Future Task Force.
UYilo ngokutsha lwezoKhenketho kwiFuture Task Force luya kugunyaziswa ukuba:
i. ukuvuselela i-UNWTO ngokuthi, phakathi kwezinye izinto, ithathele ingqalelo utshintsho kwi-UNWTO's
iindlela zokusebenza zangoku, kunye nokusekwa kweenkqubo eziphuculweyo kunye
amalinge, okuqinisekisa ukuba i-UNWTO inakho ukunika inkonzo kwiimfuno ezikhoyo nezexesha elizayo ze
icandelo lezokhenketho, ingakumbi ngokunxulumene nelizwe elisaphuhlayo;
ii. ithathele ingqalelo amanyathelo asabela kwiifowuni zehlabathi ze-UNWTO leyo
ibonelela aMazwe angamaLungu ngeenkqubo eziphuculweyo kunye namaphulo, oko
iyakwazi ukuphumeza iziphumo ezibambekayo nezinokumetwa
eyenzelwe ukukhonza ikamva, ebonelela kwiimfuno zawo onke amaLungu aMazwe
kuquka namazwe asaphuhlayo kwaye ihambelana neentsika ezintathu eziphambili zokuYila ngokutsha
UKhenketho lwexesha elizayo: uzinzo, ukomelela kunye nobandakanyo; kwaye
iii. ukukhuthaza nokuqinisekisa intatho-nxaxheba enentsingiselo yamahlakani angengawo akaRhulumente
ukuyilwa ngokutsha kwecandelo lezokhenketho kwihlabathi.
Lo myalelo wokuYila ngokutsha uKhenketho ukulungiselela iFuture Task Force uhambelana neenjongo neenjongo ze-UNWTO.
Ukuze kuqinisekiswe ukuYila ngokutsha uKhenketho kwiFuture Task Force inokwanelisa
igunya, iya kuqhubeka kude kube yiseshoni yama-26 (eqhelekileyo) yeNdibano Jikelele ye-UNWTO. UYilo ngokutsha loKhenketho lwegunya loMsebenzi weKamva luya kuhlaziywa ngokuzenzekelayo, ngaphandle kokuba kugqitywe ngenye indlela sisininzi saMazwe angamaLungu aPheleleyo akhoyo kwaye avotayo.
IV. ISaudi Arabia: Imemelela ukuBuyisela ikamva loKhenketho Ndawonye
Njengentshatsheli esebenzayo yezokhenketho, iSaudi Arabia ibonakalisa ukuzibophelela kwayo ekuqhubeni intsebenziswano kuwo onke amanqanaba ukuzibophelela okusentliziyweni yeDiriyah Communiqué esayinwe ngexesha lobuMongameli be-G20 yaseSaudi Arabia ngo-2020, eyamkela indima ebalulekileyo edlalwa lubambiswano phakathi koluntu nolwabucala. icandelo lokhenketho.
ISaudi Arabia ibe liqabane elisebenzayo le-UNWTO, ixhasa amanyathelo abalulekileyo abandakanya i-UNWTO Academy kunye neNkqubo yeeLali eziBalaseleyo ze-UNWTO kunye nokuba likhaya le-Ofisi yeNgingqi ye-UNWTO evulwe ngoMeyi ka-2021.
Njengoyena mtyali-mali mkhulu wehlabathi kukhenketho, iSaudi Arabia ithembise nge-USD 100 lezigidi ukuqalisa iTourism Community Initiative ngeBhanki yeHlabathi njengesixhobo sokuvuselela icandelo ngokwenza uluntu ngeenkqubo zokuxhobisa uluntu kunye neziko ukusasaza iinzuzo zoqoqosho kukhenketho.
UBukumkani baseSaudi Arabia bubambe ngempumelelo indima yobunkokeli ngaphakathi kwe-UNWTO.
Ukongeza ekubambeni i-Ofisi yoMmandla ye-UNWTO, kulo nyaka uBukumkani baseSaudi Arabia babambisene neNtlanganiso yeKomiti yeHlabathi yeNgxaki yezoKhenketho ye-UNWTO, kunye nentlanganiso yama-47 yeKomishoni yeNgingqi ye-UNWTO kuMbindi Mpuma. UBukumkani baseSaudi Arabia buye basebenza kwiikomiti ezininzi kunye namalungu e-UNWTO, kubandakanywa njengeSekela-Sihlalo weSigqeba esiLawulayo ngoku.
Njengenxalenye yokubonakalisa ukuzibophelela ekuYileni ngokutsha uKhenketho lwexesha elizayo, uBukumkani baseSaudi Arabia bunikezele ukuba ngusihlalo woYilo ngokutsha lwezoKhenketho kwiFuture Task Force.
ukwakha kwakhona ukhenketho I-UNWTO
sadd rehman uthi:
NgoDisemba 6, 2021 kwi-11: 17
Inqaku elihle kakhulu kwaye libhalwe kakuhle, liluncedo kakhulu kwaye liluncedo. Qhubeka uthumela umxholo oxabisekileyo onje!